တုပ်ကွေးလက်ဖက်ရည်: ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ၊ အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပါ။
မြေပဲထောပတ်: ဆူအောင်ကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်? သင်အစားအသောက်၌စားနိုင်ပါသလား?
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအတွက် Teas: ဒီမကောင်းမှုကိုတစ်ကြိမ်တည်းလုံးလုံးအဆုံးသတ်ပါ။
ကျန်းမာခြင်း	 24 သြဂုတ်လ 2016
ဆောင်း ဦး နှင့်ဆောင်းရာသီသည်ရုတ်တရက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ လေထုစိုထိုင်းဆနှင့်မိုးရွာသွန်းသောရာသီများ ဖြစ်၍ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများစွာကိုသယ်ဆောင်လာပြီးကြောက်စရာကောင်းသောတုပ်ကွေးနှင့်အတူပါလာသည်။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ဟုလူသိများသောတုပ်ကွေးသည်သင်၏အသက်တာကိုရက်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များစွာထိခိုက်စေနိုင်သောလက္ခဏာအချို့ပါလာသည်။
ဖျားခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အေးခြင်း အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ အလုပ်၌ဖြစ်စေပြင်ဆင်နိုင်ပြီးသင်၏နေ့နှင့်သင်၏စိတ်အခြေအနေကိုတိုးတက်စေနိုင်သောသဘာဝဆေးတစ်လက်၏ရိုးရှင်းသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
တုပ်ကွေးလက်ဖက်ရည်သည်အဖြေကောင်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊ ဟုတ်သည်မဟုတ်လော။ သူတို့က! အဲဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီးငါတို့ကမင်းအတွက်တုပ်ကွေးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဖက်ရည်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤအချက်များနှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုချရေးပါ။
လက်ဖက်ရည်ဟာသူတို့ရဲ့ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများပြီးဖြစ်တဲ့သံပုရာသီးမှာဗီတာမင် C များစွာပါ ၀ င်တာကြောင့်ဝမ်းလျှောတာကိုသက်သာစေတဲ့ဂျင်းမှာပါ ၀ င်တဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေရှိပြီးကြက်သွန်ဖြူကဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ ဖြတ်ထားသောအရာတစ်ခုကိုလေးညှင်းပွင့်သုံးခွက်ဖြင့်ရေနှစ်ခွက်ကိုပြုတ်ပါ၊ ၅ မိနစ်ပြုတ်ပါ၊ အပူကိုပိတ်ပြီးသံပုရာသီးတစ်ခြမ်းကိုထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်တည်ပါ။ ပြီးရင်လက်ဖက်ရည်ကိုစစ်ပြီးတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
အရွက်များသည်အဆိပ်ရှိသောကြောင့်အဝါရောင်ပန်းများကိုသာသုံးပါ။ သဘာဝထုတ်ကုန်တွေကိုအထူးပြုတဲ့စတိုးဆိုင်တွေမှာဒီပါဝင်ပစ္စည်းကိုသင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရေတစ်ခွက်ကိုဆူအောင်တည်ပါ၊ အပူကိုပိတ်ပြီးပန်းပွင့်တစ်ဇွန်းထည့်ပါ၊ ၁၀ မိနစ်မျှတည်ထားပါပြီးမှလက်ဖက်ရည်သောက်ပါ။
ယူကလစ်၊ မန်ကျည်းနှင့် rosemary လက်ဖက်ရည်
တုပ်ကွေးရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်အစွမ်းထက်ပါဝင်ပစ္စည်းသုံးမျိုး ရေနှစ်ခွက်ကိုယူကလစ်ရွက်နှစ်ရွက်၊ ပူစီနံရွက်သုံးရွက်နှင့် rosemary တစ်ပင်တို့ဖြင့် ၃ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ။ အပူကိုပိတ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုနောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်အဖုံးအုပ်ထားပါ။ သောက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကပစ်ချလိုက်တာပဲ။ အရသာရှိသောလက်ဖက်တစ်ခွက်ဖြစ်သည့်အပြင်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ဗီတာမင်များစွာပါ ၀ င်သော mucosa ကိုအစိုဓာတ်ပေးနိုင်သောပျားရည်ဖြင့်၎င်းကိုချိုစေနိုင်သည်။ ရေတစ်လီတာခွဲအတွက်သံပုရာသီးတစ်လုံး၊ လိမ္မော်သီးသုံးလုံးနှင့်ဂျင်း ၃ စင်တီမီတာကို ၅ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ။ အပူပိတ်ပြီးနောက်သံပရာရည်နှင့်လိမ္မော်သီးအရည်ကိုလက်ဖက်ရည်ထဲသို့ထည့်။ ပျားရည်နှင့်ချိုအောင်တစ်နေ့သုံးခွက်အထိသောက်ပါ။
ယနေ့သင်၏အကြံပြုချက်များကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ တုပ်ကွေးရာသီမှာသောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုသင်သိပါသလား။ မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။
ပြောင်းဖူးမှုန့်ဖြင့်ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းခြင်း - မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
နားကိုက်ရောဂါအတွက်အိမ်ကုထုံးများ - ကျွန်ုပ်တို့သည်အအောင်မြင်ဆုံးရွေးချယ်ထားပါသည်။
Erysipelas: အဲဒါဘာလဲ။ ဘယ်လိုကုသမလဲ ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။ အဲဒါကူးစက်တတ်သလား?
အိမ်လေ့ကျင့်ရေး: လေ့ကျင့်ရေးကိုမည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။ ဘာတွေကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲ။ ကြီးစွာသောအကြံပေးချက်များထွက်စစ်ဆေးပါ!